आशा गरिएका अर्थमन्त्री खतिवडाको एक वर्ष निराशलाग्दो (भिडियो) | ImageKhabar <!-instant articles-->
आशा गरिएका अर्थमन्त्री खतिवडाको एक वर्ष निराशलाग्दो (भिडियो)
-हिमाल पौडेल र राममान डंगोल(ईमेज)
काठमाडौं । वर्तमान सरकारमा सबैभन्दा बढी आशा गरिएका मन्त्री हुन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा ।
राष्ट्रिय योजना आयोग हुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भइसकेका खतिवडाले अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न छोटो अवधिमा नै उल्लेख्य काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, एक वर्षको अवधिमा अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्रलाई उकास्न खासै काम गरेको देखिएन ।
डा. युवराज खतिवडाले गत वर्षको फागुन १४ बाट अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै चर्चामा रहे । पदबहाली लगत्तै पूँजीबजारसम्बन्धी उहाँको टिप्पणीले बर्षैभरीजसो पूँजी बजार प्रभावित रह्यो ।
अर्थमन्त्री भएको महिना दिनमा मुलुकको यथार्थ आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी गराउने उद्देश्यसहित श्वेतपत्र सार्वजनिक गरे ।
श्वेतपत्र व्यावसायीक ढंगले आउन नसकेको, तथ्यांकलाई गलत ढंगले तुलना गरिएको भन्दै प्रतिपक्षी कंग्रेसले आरोप लगाएसँगै विवादित बन्यो ।
जनताको आकांक्षा पूरा गर्न भन्दै पूरक बजेट ल्याउने समेतको चर्चाका बीच जेठ १५ मा ल्याइएको बजेट प्रति निजी क्षेत्र र सत्तारुढ दलकै सांसद सन्तुष्ट बन्न सकेनन् । करका विषयले निजी क्षेत्रलाई संकुचित बनाएको निजी क्षेत्रको गुनासो रह्यो ।
हकप्रद र बोनस शेयरको आधार मूल्यमै लाभकर लिने सरकारी निर्णयको विरोधमा शेयर लगानीकर्ताहरुले शेयर कारोवार नै ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रिएसंगै सरकार निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भयो ।
तर सरकारप्रति विश्वासको कमीले बर्षैभरी पूँजी बजार ओरालो लागिरह्यो । १३ सय ७० हाराहारीमा रहेको नेप्से परिसूचक अहिले ११ सय हाराहारीमा आइपुगेको छ ।
यसै बर्ष पुसको तेश्रो साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दा प्रयोग भएका तथ्यांकलाई लिएर पनि अर्थमन्त्रालय आलोचित बन्नुपर्यो ।
बजेटमार्फत वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन शुरु हुनु भने सकारात्मक पक्ष रह्यो । एक वर्षको अवधिमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि जग तयार पारेको नले दाबी गरे ।
अर्थ मन्त्रालयमार्फत गरिएका कामले गरिबी निवारण, उच्च अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्नेतर्फ मुलुक अग्रसर रहेको अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार रामशरण खरेलको दाबी छ ।
तर, यसअवधिमा अपेक्षा गरिए अनुसार न त पूँजीगत खर्च हुन सक्यो न त बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनिकरणका लागि स्पष्ट पहलकदमी नै भए । न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न सकियो न स्वदेशी लगानीकर्तामा उर्जा थपियो ।
बरु लगानीको वातावरण विग्रीदै गएको देखियो । गत वर्ष १ सय ५औं स्थानमा रहेको डुइङ विजनेस इन्डेक्स यस वर्ष १ सय १० औं स्थानमा झरेको छ ।
पूँजीगत खर्चको अवस्था पनि दयनीय नै छ । मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार खरेल पूँजीगत खर्च गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयको मात्रै नभएको बताए ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने रणनीति बनाउनु अर्थ मन्त्रालयका लागि चुनौतीपूर्ण भने देखिन्छ ।